Madaxweyne Donald Trump Oo Ku Hanjabay In Uu Qaadi Doono Tallaabo Aad U Weyn – somalilandtoday.com
Madaxweyne Donald Trump Oo Ku Hanjabay In Uu Qaadi Doono Tallaabo Aad U Weyn
(SLT-Washington)-Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ku dhawaaqi doono xaalad qaran oo deg deg ah, si uu u billaabo dhismaha darbiga xadka Mareykanka iyo Mexico, isagoo aan ansixin ka helin aqalka wakiillada ee Koongareeska.
Madaxweynaha ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa markii hore rajo wanaagsan ka qabay kulanka 90-ka daqiiqadood qaatay oo ka dhacay aqalka Cad , wuxuuna sheegay inuu yahay mid ay “natiigo wanaagsan ka soo baxeyso”.
Trump ma ku dhawaaqi karaa xaalad qaran oo deg deg ah?
Waxaa shaki la galinayaa in Madaxweyne Trump uu ku dhawaaqi karo xaalad qaran oo deg deg iyo in kale.
Tallaabo noocaasoo kale ahna waxay horseedi kartaa in madaxweynaha uu mucaaraddo kala kulmo xisbiga uu kasoo jeedo qudhiisa, waxaana dabcan loollan lagu galin doonaa dhinaca maxkamadaha.